Dagaal ka dhacey Beydhabo
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in uu Xaley Dagaal ku dhex marey Garabyada Sheekh Adan Madoobe iyo Maxamed Ibraahim Xaabsade oo isku dhinac ah iyo Xasan Maxamed Xaabsade oo isku dhinac ah iyo Xasan Maxamed Nuur (Shaati guduud ) oo dhinac.
Dagaalkaan ayaa Bilowdey Xilli dambe oo ay dadka Badankiisu hurdaan Abaarihii 3:30pm socdeyna ilaa Waaberigii 7:00am.
Ma jirto Cid si rasmi ah uga soo warami karta Qasaaraha uu geystey Dagaalkaan balse warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in ay ku Dhinteen ilaa 4 qof oo ah Maleeshiyooyinkii Dagaalamayey.
Inkastoo ay jiraan warar is burinayaa oo Garabba garabka kale ku sheegayo in uu ka Diley Dad badan marka laga soo tago Sheegashada labada dhinac.
Wararku waxey sheegayaan in Gacan ku heynta Magaalada Baydho ay wali ugu jirto Garabka Sh. Adan Madoobe iyo Xaabsade.
Dagaalkaan ku saleysan Xafiiltanka Siyaasadeed ee la xiriira Gacan ku heynta Gobolka BAY ayaa ah mid soo jiitamayey muddo ku dhow 8 bilood Gaar ahaan Magaalada Baydhabo ayaa aheyd mid hadba Garab Gacanta u gasha inkastoo bilihii Dambe looga Awood roonaadey Garabka uu hogaamiya Shaati guduud, hadana waxey Maleeshiyada Daacada u ah Xasan Maxamed Nuur (Shaati guduud)ay soo Qaadaan Weeraro is dabo joog ah oo u badan Arbushaad ay sameeyaan Habeenkii, waa sida warbixinada halkaas ka imanaya tilmaameene, Taasoo Qalqal badan ku abuurta goobahaas.
Dagaaladaan ku Saleysan Ku dhifoo ka Dhaqaaq ayaa Dad weynaha Bay Gaarsiiyey in Galab dheer ay Xiraan Goobaha Ganacsiga Cabsi ay ka qabaan in dagaal ku helo ayaga oo Badeecadoodu ay kala daadsan tahay
WQ:- Ali Mohamed Haji (Calideeq)